I-German Shepherd Lab Mix: Inja Yomndeni Ehamba Phambili Emhlabeni? - Izinhlobo
I-German Shepherd Lab Mix: Inja Yomndeni Ehamba phambili Emhlabeni?
I-German Shepherd Lab Mix yilokho okwenzekayo lapho uwela inja yaseMelika kamakhelwane, iLabrador Retriever, enoMalusi waseJalimane ohlakaniphe kakhulu emhlabeni?
Enye yezinja ezihamba phambili ezilungele umndeni, lolu hlobo lokuwela luthembekile, luhlakaniphile, luyadlala futhi luzokhombisa abanikazi balo uthando olungenamkhawulo. Konke okudingayo ekubuyiseleni kungamanani amaningi wokuzivocavoca okugcwele ubumnandi.
I-Sheprador (eyaziwa nangokuthi i-German Shepherd Labrador mix) iyinja ephakathi nendawo enkulu enamehlo amakhulu amahle ansundu, nokwehluka ekubukekeni kwejazi kusuka ekukhanyeni kuye kokumnyama.
Ingabe ufanelekile? Ake singene kumhlahlandlela wabanikazi bethu.
Isifinyezo solwazi lwe-German Shepherd Lab
Inhloso Inja Yomndeni
Ifanele i- Imindeni ephumayo futhi esebenzayo
Usayizi 22 kuya ku-26 ”(owesilisa) noma u-20 kuye ku-24” (owesifazane)
Isisindo Ama-45 - 95 lbs (wesilisa) nama-35 - 45 lbs (abesifazane)
Isikhathi sokuphila Iminyaka engu-10 kuya kwengu-12 ubudala
Ukuhluka Kwemibala I-Tan, isanti, nsundu nomnyama
Isimo Buhlakaniphile, bunothando, buyadlala, bunamandla futhi buqotho
Ukuzivocavoca Nsuku Zonke Phezulu - Kukhethwa imizuzu engama-90 - 120 usuku ngalunye
Ukusetshenziswa Kokudla Kwansuku zonke Izinkomishi ezintathu kuya kwezine zekhwalithi ephezulu eyomile ngosuku
Izinkinga Ezaziwayo Zempilo I-Dysplasia ne-gastric dilation volvulus (bloat)
I-German Shepherd Lab Mix Mix Ukubuka konke
Imidlwane Yama-Shepherd Lab yaseJalimane
I-German Shepherd Mix Lab Temeperamnet nokuziphatha
Ungayinakekela Kanjani Ixube Labelusi BaseJalimane
Ukuqeqesha i-German Shepherd Lab Mix
Ukubukeka Kwenhlanganisela Yomalusi WaseJalimane
Ukulungisa Umxube Wakho
Igama elithi Sheprador linikezwa inja enabazali abangoMalusi waseJalimane ongenacala kanye noLabrador Retriever
Izinhlobo ezimbili zomhlaba ezithandwa kakhulu ziyahlangana futhi zisinikeze uhlobo olusha lomklami wezinja. Onesibindi, ohlakaniphile futhi Umalusi onamandla waseJalimane abashade nabadlali abadlalayo, abanamandla futhi ithandeka ngokweqile, uLabrador .
Isizukulwane sokuqala seJalimane Shepherd Lab Mix puppy, esivela kumzali waso ongacwengekile sizala i-German Shepherd neLabrador Retriever, sizobiza cishe ama- $ 200 kuye ku- $ 600 USD.
ISheprador ayilona uhlobo olubizayo njengoba kusazoduma ukufana nezinye izinhlobo zezinja ezinjengo iCavachon ebizayo kodwa encane .
Intengo yalolu hlobo izohlukahluka kuye ngomfuyi kuya kumfuyi kodwa kuphephile ukusho ukuthi uma umzali ezala enempilo, imidlwane ibiza kakhulu.
Udoti ngamunye ungahluka ngomzali oyedwa ovame ukubusa ngokubukeka. Usayizi kadoti uyahlukahluka ebangeni kusuka emidlwane eyisithupha kuya kweyishumi ngokwesilinganiso.
Alukho usuku olubekiwe lokuthi loluhlobo oluxubekile lwaqala ukwenziwa nini futhi kuphi. Kodwa-ke, njengoba zombili i-German Shepherd neLabrador Retriever ziyizinhlobo ezithandwayo kungenzeka ukuthi sekunesikhathi zikhona.
Umalusi waseJalimane ungomunye we izinhlobo zezinja ezithandwa kakhulu emhlabeni . Baqala njengenja esebenzayo eJalimane ngo-1899.
ILabrador Retriever nayo iyinhlobo ethandwa kakhulu emhlabeni wonke futhi yaqala maphakathi no-1830s emuva kwesikhathi eNewfoundland etholakala e-United Kingdom.
Namuhla, zombili izinhlobo zidume ngemvelo yazo ehlakaniphile futhi eqotho futhi zombili zintshontsha izindawo ezimbili eziphezulu zezinhlobo zezinja ezithandwa kakhulu emhlabeni.
Amagama amane: inja yomndeni ephelele.
Kungashiwo, ngokuqiniseka okuphelele, ukuthi lolu hlobo oluhlanganisiwe luphelele kunoma yimuphi umndeni. Bangabangani abamangazayo, abathembekile nabanothando. Inqobo nje uma beqeqeshiwe, bezivocavoca futhi behlangana nabantu kahle, lapho-ke akufanele ube nezinkinga ngale canine enothando.
Inhlamba izungeze olunye lwezinhlobo zabazali, i-German Shepherd, kusuka ukusebenzisa kwabo izinja zamasosha phakathi neMpi Yesibili Yomhlaba. Isici sokuziphatha sokuhlukumezeka sivame ukuhlotshaniswa nama-GSD. Kodwa-ke, yize ivikela ngokwemvelo, lolu hlobo luyinja enolaka .
Uma ukhuliswe endaweni enempilo, futhi uhlangana kahle nabantu, i-pup izokhombisa ngokujwayelekile azikho izimpawu zokuhlukunyezwa . Kungashiwo okufanayo nge-German Shepherd Lab Mix.
Zimnandi ngezingane ngenxa yobuntu bazo obudlalayo nobunamandla. Kodwa-ke, lolu akulona uhlobo olufanele lwezinja lomndeni noma lomnikazi ovilaphayo; zidinga inani elifanele lomsebenzi wansuku zonke. Uma bengakutholi ukukhuthazwa okufanele, nokuzivocavoca umzimba, lapho-ke bayoba nesithukuthezi futhi babhubhise ekhaya. Ngakho-ke uma uvilapha, noma kungavamile ukuba ube sekhaya, lindela ukuthi uzobuya endaweni yempi futhi ubhubhise usofa.
Zinguhlobo oluhlakaniphile ngakho-ke qiniseka ukuthi uziphatha njengoyedwa. Phonsa kwezinye izihlaxa ngenkathi ukuzo. Ukuthanda nokukhalipha lolu hlobo luyisengezo esifanele kunoma imuphi umndeni osayizi.
I-German Shepherd Lab Mix yakho ingahle ikuthande ukudla njengoba izokuthanda. Inja enkulu futhi esebenzayo ihlala inesifiso esikhulu ngakho-ke lungela.
Idla malini iSheprador?
Ngokwesilinganiso, inja enkulu, enempilo futhi esebenzayo idinga amakhalori angama-30 ngesisindo somzimba ngosuku. Ngalolu hlobo lwesiphambano kufanele ludle izinkomishi ezimbili kuya kwezintathu zekhwalithi ephezulu eyomile ngosuku. Lokhu kungabalwa kusetshenziswa ithebula elingezansi:
Ama-calories wansuku zonke
Owesifazane Ama-35 - 45 lbs Amakholori ayi-1050 - 1350
Owesilisa Amakhilogremu angama-45 - 95 Amakholori angu-1350 - 2850
Njengoba ukwazi ukubona, i-Male German Shepherd Mix Lab idinga amakhalori amaningi kunowesifazane ngenxa yokwehluka kwawo ngosayizi. Kodwa-ke, kubalulekile ukukhumbula ukuthi nabesilisa bazohluka ngosayizi, ngakho-ke isabelo sabo sekhalori kufanele silungiswe ngokufanele. Lokhu kuyiqiniso nangesikhathi umdlwane wabo kanye nezigaba zokukhula .
Ngokwengeziwe, izidingo zekhalori zomntwana wakho zingashintsha ekuphenduleni umehluko kubudala babo, usayizi namazinga womsebenzi.
Kunezinhlobo ze-kibble eyomile esezingeni eliphakeme eyenziwe ngokukhethekile ngezinhlobo ezinkulu zezinja. Lezi zidlo zenzelwe ukuqukatha inani elifanele lamaprotheni namafutha adingwa yinja yakho enkulu ukugcina isibalo sawo esinamandla.
Ukudla kufanele kusatshalaliswe ngaphezulu kwezinsizakalo eziningi kuye ukusiza ukugaya okulungile , futhi unciphise amathuba okuqunjelwa .
Ukudla okubili kungahlukaniswa kube yisidlo sasekuseni nesidlo sakusihlwa. Cabanga ngakho njengomvuzo ngemuva kwakho konke lokho kuvivinya amandla namandla owasebenzisile.
Ukukhuluma ngemiklomelo, yize kungaheha ukunikeza ingane yakho oyithandayo ukudla nokuphatha; ngicela ungenzi.
Uhlobo olulodwa lomzali olumsulwa, iLabrador, lujwayele ukukhuluphala kanye nokukhuluphala ngakho-ke kubalulekile ukuthi lolu hlobo lungadliswa ngokweqile; namathela ekudleni okulula .
Ngokwesilinganiso, iSheprador idinga ubuncane behora elilodwa lokuzivocavoca ngosuku; izinsuku ezithile zijabulela amahora ambalwa.
Ukuvivinya i-German Shepherd yakho neLab Mix yakho kufanele kube nokudlala okuningi nokushuba okukhulu. Ukuba negceke elikhulu nelivulekile kuyasiza. Uma lokhu kungakuthandi, kungani ungenzi i-pup yakho ibe ngumlingani wakho omusha osebenzayo?
Zama thatha inja yakho ukugijimela okuhle ngasemfuleni wakho wasendaweni noma epaki, noma kungani ungami epaki ngemuva komsebenzi? Zombili izinja zakho nezingane zakho zizothola isikhathi sabo sokudlala esidingeka kakhulu ukuze bashise wonke amandla abo ukuqinisekisa ubusuku obunokuthula nobufanelwe kahle ngumlilo.
Ngaphandle kokuzivocavoca umzimba ngendlela efanele, inja yakho ingathola ukuphumula futhi ibhoreke futhi ibe yimbi nakakhulu, ivila futhi ikhuluphele; okuzokwenza ukunciphisa izinga lempilo yabo .
Ukuqeqesha noma iyiphi inja akulula, noma kunjalo, lokhu kuhlanganiswa komklami kuzokwenza impilo yakho ibe lula kancane njengoba bobabili i-German Shepherd neLabrador beyizinhlobo ezihlakaniphile futhi ezisebenza kanzima ezithanda ukujabulisa.
Konke okudingayo ukuqeqesha inja yakho nguwe nokuqina okuhle kwe-ol 'positive. Futhi-ke, inja yakho nayo. ukuqeqeshwa okusekelwe idonswe phansi ngakho-ke akufanele isetshenziswe.
Klomelisa inja yakho ngesikhathi sokuziphatha okuhle ngokuphatha, ukuthanda noma amathoyizi. Kukuwe ukuthi unqume ukuthi yiluphi uhlobo lomvuzo inja yakho ephendula kakhulu kuwo. Ungakuhlola nalokhu futhi .
Icebo lokuqeqesha inja yakho ukuxuba ukukhuthaza kwengqondo nokuzivocavoca umzimba ndawonye. Lokhu kuzogcina inja yakho ihlanganyela futhi iphapheme kunqubo yokufunda futhi izoguqula isikhathi sokuqeqesha sibe yisikhathi esengeziwe sokudlala.
Imibono Emihle Yokukhuthaza Ingqondo
Kungani ungazami ukuhambela le mfanelo ngemidlalo ethile yokuzijabulisa. Umdlalo omane wokulanda uzokwenza iqhinga.
Mane uphume uyothenga i-pup yakho ibhola elinobungane lenja, uliphonse ibhola, futhi ubuke ngokwesaba njengoba bebaleka ukuyobamba ibhola; phinda!
Ukuvuselelwa kwengqondo kunganikezwa ngezindlela eziningi kunalokho ocabanga. Ungashintsha eminye imizila yokugijima / yokuhamba, ubayise ezindaweni ezintsha nezingajwayelekile futhi ubuke njengoba bethatha imvelo entsha ngokujabula.
Ukuzijabulisa Le Nja
Ukuhlalisana kwalolu hlobo kubaluleke kakhulu, ikakhulukazi ngenxa yemvelo evikelayo yomzali wabo ongumalusi waseJalimane. Ngenxa yalokhu, ukuzihlanganisa nabantu kubalulekile futhi kumfundi wakho. Ukuhlanganiswa kwakho kufanele kujwayele ukuhlangana nabantu abasha kusukela ebuncaneni ukuze bangabi nengcindezi ekushintsheni kwezindawo. Lokhu kuzosiza iSheprador yakho ukuba ibe ngumuntu omdala onobungane futhi oqeqeshwe kahle.
Ukuxuba kwakho kuzoba nesikhathi sokuphila seminyaka eyi-10 kuye kwengu-12 ngokwesilinganiso. Yize izinja ezingumklami zivame ukukhiqizwa ukuze zikhiqize ukuxubana okuphelele kwezinhlobo ezinezinkinga zempilo ezincane, kungenzeka ngeshwa zizuzwe njengefa. ILebhu kaMelusi Wokuxuba yaseGerman yaziwa ukuthi ihlupheka ngeDysplasia neBloat.
A kakhulu isifo esivamile samathambo itholakala ku-German Shepherds; okwakukhona esinye sezizathu kwafuywa uShiloh Shepherd. Kungukungalungi kwamalunga ezinja okungadala ubuhlungu nokuvuvukala.
I-Canine dysplasia ingaqala esemncane noma emdala. Uma ishiywe ingalashwa, i-pup yakho izoba sezinhlungwini ezinzima futhi ingadinga nokwelashwa okuhlinzekwayo.
I-Gastric Dilation Volvulus (i.e. Bloat)
Ukuqunjelwa kwenzeka lapho isisu se-canine siyanwebeka ngokuphendula isidlo esikhulu. Esikhundleni sokukhipha igesi ngokujwayelekile, iyavaleleka, ingcindezi iyakhiwa bese ibangela ubuhlungu. Njengoba iLabradors isifuba esijulile, iyakwazi ukuvuvukala. Kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi ingane yakho ayikudli ukudla ngokushesha okukhulu. Uma ubona ukuthi i-pup yakho ayijabule, ungangabazi ukuxhumana nodokotela wezilwane.
Ungavumeli usayizi wabo omkhulu ukwethuse, lolu hlobo luwukuthamba okukhulu!
Inja yakho ingakhula ibe nkulu njengoMalusi waseJalimane, noma ingafana nosayizi weLabrador. Owesifazane uzokala noma yikuphi ukusuka kumakhilogremu angama-35 kuye kwangama-45 kanti abesilisa ngokuvamile baba bakhulu kusuka kumakhilogremu angama-45 kuye kwangama-90. Ukuphakama kokubuna kwabo kuvame ukuzungeza ama-intshi angama-20 kuye kwangama-26.
Ihlelwe njengohlobo lwenja ephakathi nendawo enkulu, enesisindo esisuka kumakhilogremu angama-35 kuye kwangama-95, inja yakho izoba nesifonyo esisemkhatsini kuya kweside kanye nomfanekiso oqinile, onesibindi.
Izindlebe ezimfishane, eziphapheme nezikhonjiwe ezifana nezikaMalusi waseJalimane, noma izindlebe ezithambile nezilenga njengaleyo yaseLabrador. Ukuvela kwe-German Shepherd Lab Mix yakho kuzohluka kakhulu kusuka kumntwana kuya komunye futhi akunakubikezelwa.
Njengoba kunje uhlobo lomklami wezinja , ayikho indinganiso yokuzala yale nja; ukubukeka kungafana noma yi-German Shepherd noma i-Labrador.
Amehlo abo azoncibilika ngisho nezinhliziyo ezibandayo. Okukhulu futhi onsundu, nakanjani kunzima ukungathandani nakho!
ILab Mix German Shepherd inengubo emfushane, ephindwe kabili, enemibala esukela kusikhumba kuya konsundu kuya esihlabathini ngisho nokumnyama ( kusuka ku-GSD emnyama ).
Zombili izinhlobo zabazali zikhipha izinwele eziningi; ikakhulukazi ngesikhathi sentwasahlobo nasekwindla. Ngalesi sikhathi, ingane yakho ilungiselela ijazi lasebusika nehlobo ngokufanele.
Ukulungisa inja yakho njalo kuzosiza ukunciphisa noma iziphi izinwele zezinja ezingafuneki ekuqongeleleni endlini. Ukuze unciphise ukuchitheka okweqile, zama ukuxubha inja yakho izikhathi ezimbili noma ngaphezulu ngesonto. Kunconywa ukuthi uqale ukuxubha i-pup yakho usemncane.
Zama ukugeza inja yakho njalo ngenyanga, mhlawumbe nge-shampoo eyenziwe ekhaya . Kunconywa ukusikeka njalo kwezipikili. Futhi, ungakhohlwa amazinyo enja yakho. Zama ukuzixubha nsuku zonke noma umane ubanikeze umuthi wamazinyo.
Ngakho-ke, ingabe izingane zakho seziqalile ukukucelela i-German Shepherd Lab Mix okwamanje?
Inja exubile ehlakaniphile, okulula ukuyiqeqesha, edlalayo futhi ethembekile exube ukuvikela. Lokhu ukwengeza okuphelele komndeni wakho nezingane.
Uma unegceke elingasemuva elibanzi, umndeni onamandla, nothando oluningi ongakunikeza cabanga nge-German Shepherd Labrador Cross njenge-canine ephelele.
Umlingani osebenza kahle, onakekela izingane nelungu lomndeni. Phawula ngezansi bese usitshela indaba efudumeza inhliziyo ngawe ne-German Shepherd Labrador Cross yakho.
Izinkinga Zesikhumba Ezizinja
Umalusi waseJalimane onezinwele ezinde: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga
izinja ezelusi ezibomvu ezimnyama zaseJalimane
inja yami inezithungu ezomile
amagama enja yentombazane yama-pitbulls
inja yami izwa ishisa uma ithintwa
Intengo emaphakathi ye-bulldog yaseFrance
izithombe zomxube we-chihuahua terrier